Icandelo elibi kakhulu lokuShatshazwa kwabantwana kwiMbali yaseOregon
U-Angela McAnulty uhleli emgceni wokufa kwi-Coffee Creek Correctional Facility e-Oregon emva kokumangalelwa enecala lokubulala ngokubulala intombazana yakhe eneminyaka eyi-15 uJeanette Maples. Wavuma nokuba netyala lokutshintsha nokutshabalalisa ubungqina kwimeko.
U-Angela McAnulty's Childhood Years
U-Angela McAnulty wazalwa ngo-Oktobha 2, 1968, eCalifornia. Xa u-Angela eneminyaka emihlanu ubudala, unina wabulawa kwaye u-Angela wasebenzisa iminyaka yakhe yokuhlala esemva kunye noyise kunye nabazalwana bakhe ababini.
Uyise kaMcAnulty wayexhaphaza, ngokusoloko eshiya ukutya kubantwana njengendlela yohlwaywa.
Xa uneminyaka eyi-16 ubudala, uMcAnulty waba nequmrhu lomsebenzi wezemidlalo waza washiya ikhaya. Kwakukho ngeli xesha ukuba wayebandakanyeka neziyobisi. Kamva wadibana no-Anthony Maples waza waba nabantwana abathathu, amakhwenkwe amabini, u-Anthony Jr noBrandon kunye nentombazana enye, uJeanette.
I-Maples noMcAnulty baboshwa kwiimirhumo zeziyobisi kwaye abathathu abantwana babekwe kwinkathalo yabantwana. UMcAnulty waphinda wafumana imvume yokuphela kukaJeanette ngo-2001 emva kokukhishwa kwakhe entolongweni. Kwakhona waba nomnye umntwana, intombi ebizwa ngokuba Nomonde.
Ngo-2002, u-Angela wadibana waza watshata umqhubi weloli elide elibizwa ngokuthi uRichard McAnulty. Babenomntwana kamva emva komtshato. Ngo-Oktobha 2006, intsapho yafudukela eOregon, yashiya u-Anthony Jr. noBrandon. Abafana bebethumele iileta kumgwebi ecela ukuba bahlale bezinyango kunokuba babuyiselwe kumama wabo ohlukumezayo.
Wazalelwa ngo-Agasti 9, 1994, uJeanette Maples wayichitha iminyaka emithandathu yokuphila kwakhe kwinkathalo yabantwana ngaphambi kokuba abuyiselwe kunina. Ngokweengxoxo kunye namalungu entsapho, u-Angela waqala ukuxhaphaza uJeanta emva kokuba abo babini bahlangane.
Uchazwa njengomntwana olungileyo, uJeanette waya esikolweni esidlangalaleni waza wafunda ngokucace.
Wanikezelwa ngamabhaso ahamba ngokugqibeleleyo kwibakala lesixhenxe nelesibhozo. Nangona kunjalo, kwintsebenziswano yoluntu uJeanette wayenenkinga enzima. Uthunyelwe esikolweni kwiindawo eziqhekekileyo, ezingcolileyo kunye nezigubungela ezigqithiseleyo, ngamanye amaxesha wayexhaswa ngabantwana afunda nabo. Nangona wayenentloni, wakwazi ukwenza abahlobo abambalwa, nangona wayeza kubabona esikolweni kuphela. Unina akazange amvumele ukuba ameme abahlobo ekhaya lakhe.
Ngomnyaka we-2008, emva kokuba umhlobo ebone izibhamu eziliqela kuJeanette ngexesha lokufundela, wayevuma ukuba unina akayi kumvumela ukuba adle kwaye waxhatshazwa. Umhlobo utshele abazali bakhe kunye neenkonzo zoKhuseleko lwaBantwana baqhagamshelana nabo. Abameli beCPS babengafuni ukuphendula oko bakubiza ngolwazi lwesibini. Utitshala wadibana naye owayethetha noJeanette waza waphinda wavuma ukuba waxhatshazwa kwaye wayethusa unina. Utitshala waqhagamshelana neCPS waza wabika iingxaki zakhe.
I-CPS iya kwikhaya likaMcAnulty kodwa yavala loo mva emva kokuba uMnumyy iphikise kakubi intombi yakhe kwaye wathi izigxeko zikaJeanette azichazela njengomqambimanga. Emva koko wamtsala uJeanette esikolweni, esithi wayeya esikolweni ekhaya indodakazi yakhe. Oku kwashiya uJeanette ngokupheleleyo kwaye wanciphisa amathuba akhe okufumana uncedo.
Ngo-2009 enye inxeba yenziwe kwi-CPS, ngeli xesha ngumnxebi ongaziwa owamva waba nguLee McAnulty, ugogo kaJeanette. Wabiza i-CPS emva kokubona indlela uYeanette ayenayo ngokugqithisa kakhulu kwaye ngenxa yokuba umntwana wayenomlomo olwahlukileyo, zombini izimo u-Angela McAnulty azinakunyanzelwanga xa kucetyiswa ukuba athathe uJeanette kumgqirha.
Kwiinyanga ezilandelayo, ugogo kaJeanette wabiza iiCPS ngamaxesha amaninzi, kodwa i-agency ayizange ilandele iifowuni. Udumo lwakhe lokugqibela lwenziwe ngeentsuku zokufa kukaJeanette.
Ukufa kukaJeanette Maples
NgoDisemba 9, 2009, malunga no-8 ntambama, u-Angela McAnulty uxelele abasebenzi bezongxamiseko ukusabela kwi-call 9-1-1 eyenziwe kwindlu yakhe, ukuba intombi yakhe uJeanette akaphefumli. Iiparamedics zathola intombazana eneminyaka eli-15 ubudala elinezincinci ezifakwe kwigumbi lokuhlala kunye neenwele ezimanzi kwaye zingenayo ihembe.
UMcAnulty uxelele abagadi be-paramedics ukuba uJeanette wayewile kwaye wabonakala ihora elide ngaphambi kokuyeka ukuphefumula. Nangona kunjalo, ukuvavanya okufutshane kwintombazana efa kwaxelela ibali elihlukile. Wayenemivimbo emininzi ebusweni bakhe, ukusika ngaphezu kweso lakhe, kunye nezikrakra emlonyeni wakhe. Kwakhona, uJeanette wayenamandla kangangokuba wayekhangeleka kuncinci.
UJeetette wadluliselwa esibhedlele apho kuthiwa ufile ngo-8: 42 ntambama
UDkt Elizabeth Hilton
Esibhedlele, uDkt. Elizabeth Hilton wahlola uJeanette waza wafumanisa ukuba ubuso bakhe busoloko buqhekekile. Kwakukho izikrakra kunye namanxeba angqongqo entloko, emilenzeni nasemva, kuquka ne-femur ebonakalayo. Amazinyo akhe angaphambili aphukile kwaye imilomo yakhe yahlanjululwa.
Kwaye kwacaca ukuba uJeanette wamancibilika, umzimba olambileyo kwaye wabethwa wawungekho ngenxa yokuwa okulula.
Amapolisa aphangela ikhaya likaMcAnulty aze afumane igumbi lokulala eligcoba igazi elenza amalungu omndeni avume uMcAnulty azame ukucoceka ngaphambi kokuba abize i-9-1-1 ukuba ancede intombi yakhe efa.
URichard McAnulty wavuma ukuba u-Angela wayefuna ukumngcwaba uJeanette kunokuba abize u-9-1-1, kodwa wagxininisa ukucela uncedo. Wenza umnxeba ngoxa u-Angela azama ukufihla ubungqina bokusetyenziswa gadalala okwangaphakathi ngaphakathi kwekhaya.
Kwabanjwa udliwano-ndlebe nabantwana ababini kwikhaya laseMcAnulty. Ukunyamezela kwaxelela amapolisa ukuba u-Angela noRichard balambile u-Jeanette kunye nokuthi u-Angela wamshaya ngokuphindaphindiweyo. Kamva wathi uRichard no-Angela bahlala bebetha uJeanette emlonyeni kunye nezicathulo okanye izandla.
Udliwano-polisa luka-Angela McAnulty
Ngethuba lokuqala udliwano-ndlebe lwama polisa, u-Angela McAnulty uzame ukuqinisekisa abacuphi ukuba ukulimala kukaJeanette kubangelwa ukuwa. Uthe umyeni wakhe wayejongene nokuqeqesha abantwana kwaye wayengazange ahlukuze Angela.
Utshintshe ibali lakhe kuphela emva kokuba abaphandi bavumeleke ukuba bathethe nabanye amalungu omndeni abaye bachaze kakubi ukuxhaphazwa kuka-Angela kuJeanette. Xa ebuzwa malunga noJeanette ophelelwe ngumzimba kunye nesifo esikulambileyo, uMcAnulty wachaza ngokungazi indlela yokumondla kuba sele ewile aze ahlule umlomo wakhe.
Watshela abacuphi, "Isizathu sokuba kutheni unyanisekile kuThixo xa wahlula umlomo wakhe, ndingazi kakuhle indlela yokumondla."
Abaphandi baqhubeka becela umngeni uMnquy utsho ukuthini de ekugqibeleni waqala ukuxelela oko kwenzeka ngokwenene.
"Ndiyiphutha," watsho. "Andifanele ndibe ndiyifake intombi yam ngebhanti, andifanele ndiyenze loo nto yayiyingozi kum, andifanele ndiyenze nayiphi na into endiyenzayo. Ndiyayixolisa, andiyazi ukuba ndingayifumana njani. "
Kodwa xa kufike oko uMcAnulty ayekucinga ukuba yinto yokugqibela eyabangela ukuba intombi yakhe ifile, wayesekela phantsi.
"Andizange ndenze ukulimala kwentloko." Andizange ndenze oko, "watsho kubacuphi. "Ndiyazi ukuba mhlawumbi wabulawa ngenxa yokulimala entloko yakhe, ngekhanda xa ewa phantsi." Andizange ndiyibulale intombi yam phezu kwesigxina.
"Ndicinga ukuba izinto ayenzileyo ziza kum," wachaza.
"Andiyazi." Ukunyaniseka kuThixo andiyazi, ndiyaxolisa.
UMcAnulty utshele abacuphi ukuba mhlawumbi kufuneka "athabhe ukutshaya" ukuze ancede ukuphelisa uxinzelelo lukaJeanette.
Ukuhlushwa kunye neNkathazo
U-Angela noRichard McAnulty baboshwe baza bahlawuliswa ngokubulala ngokugqithiseleyo ngokuthi "baqhayisa ngamabomu baze bahlasele" uJeanette Maple.
Ngokusekelwe kububungqina obufumaneka kwikhaya leMcAnulty, iingxelo ze-autopsy kunye nodliwano-ndlebe kunye noMcAnultys, abantwana babo kunye nezinye izalamane, abatshutshisi bazimisele ukuba oku kulandeleke kwiinyanga eziliqela.
UMcAnulty wamgweba uYeanette rhoqo usebenzisa iindlela ezahlukeneyo zokuxhaphazwa nokuhlushwa. Ukufihla ukusetyenziswa kakubi kwabanye abantwana ekhaya, wayeza kuzisa uJeanette egumbini lakhe lokulala, kamva kuchazwe ngabatshutshisi njengendawo yokuhlushwa, vula umcoco wokucoca ukusilalisa izandi, ugxinxe uJeanette ukuba ahlambulule i-naked aze aphinde ambethe ngokuphindaphindiweyo naye ngamabhande amabhantshi, amathinte, aze amhlukumeze ngamapelisi.
Uvavanyo kwizinto ezahlukeneyo ezifumaneka ekhaya ziza kubonisa kamva ukuba ziqulethe igazi kunye neenxalenye zeenyama kaJeanette.
UJeanette naye wayenanto yokutya kunye namanzi kwiintsuku ngexesha. Wanyanzelwa ukuba aphuze amanzi kwisitya senja kunye nesitya sokungasese sokucima ukoma kwakhe.
Ukulahla izicubu kwakunqunywe, mhlawumbi ngommese, ukusuka kumaxube aye atheleleke kwinqanaba lokubhenca amathambo kwi-hip hop.
UJeanette waphoqeleka ukuba alale kwikhadibhodi ukuze igazi lingenangena kwi-carpet. Wayesoloko eshiywe eboshwe emva kokubetha okanye kunyanzeliswa ukuba aguqe ngeengalo zakhe emva kwakhe njengokungathi uphendulelwe.
UMcAnulty wenza ukunyamezela ukuqokelela iimfesi zeenja ezivela kwidare apho uMcAnulty wayeza kuguqa phezu kobuso bukaJeanette nomlomo.
UMcAnulty wanyanzelisa uJeanette ukuba eme phambi kweendonga kunye neengalo zakhe eziphakanyisiwe iiyure ngelo xesha. Ngokuqhelekileyo wayekwazi ukuma nje ngelinye ilanga ngenxa yokuba elinye ilinyawo lalinomonakalo omkhulu ukusuka ku-Angela ukugubha phezu kwayo.
UAngel noRichard McAnulty batshaya uJeanette emlonyeni kunye nezicathulo kunye neengalo zezandla zabo, ezenza umlomo wakhe. U-Angela wenqaba ukufumana uncedo lwezonyango kuJeanette oluye lwaphumela ekuphumuleni komlomo wakhe ngaphakathi. Ingqumbo ebomvu eyakhayo yashiya umlomo wayo waqhwala.
UMcAnulty wambetha uJeanette ngenjongo yokubangela umonakalo omkhulu, okubangela ukuba amanxeba endala avule kwaye athathwe.
Ubungqina obuphazamisayo nguJeanette Maples Half Dade
Ngokutsho kobubungqina obunikwe udade-dade kaJeanette Maples, u-Angele McAnulty waqala ukuxhaphaza u-Jeaneette ngokukhawuleza xa waphinde wamkela umntwana owayeneminyaka eyisixhenxe ubudala ngelo xesha.
Udade-dade uthetha ngesiganeko nje iintsuku ngaphambi kokuba uJeanette afe, xa uMcAnulty wambonisa isilonda malunga nobukhulu bekota emva kwentloko kaJeanette. UMcAnulty wambiza ukuba umntu "wahlaselwa emva kwentloko ngegatsha, kuya kubangela ukulimala kwengqondo." Udade waqhubeka echazela ukuba ngelo xesha, uJeanette wayesebenza ngokungaqhelekanga kwaye wayengenalo.
Xa ebuzwa malunga noko akukhumbulayo ngeli xesha uJeanette waqala ukubuyela kuMcAnulty, udade wathi emva kokuba uMcAnulty etshata noRichard McAnulty ngo-2002, uJeanette wayevalelwe egumbini lokulala ukuze "angabi yinxalenye yentsapho."
Waqhubeka uchaza indlela awayebonile ngayo uAngele noRichard baxhaphaza uJeanette, okuquka ukubetha ngezicathulo nokumnqanda ukutya.
U-Angela McAnulty ugwetyelwe ukufa ngenxa yokuhlushwa nokubulawa kwentombi yakhe .
URichard McAnulty ugwetyelwe ebomini entolongweni kungekho nethuba lokutshatyalaliswa kwaze kwaba ngu-25 iminyaka. Wayephika ngokunyanisekileyo uJeanette kodwa wavuma ukuba akazange amkhusele kumama okanye axelele ukusetyenziswa kakubi kumagunya.
U-Anthony Maples Sues i-Oregon Isebe Lemisebenzi Yoluntu
URhulumente waseOregon wavuma ukuhlawula i-$ 1.5 yezigidi kwifa likaJeanette Maples kwisigwebo sokufa ngokungafanelekanga sikayise u-Anthony Maples.
Kwaye kwacaciswa ukuba i-CPS izithunywa zahluleka ukuphanda iingxelo ezine zokusetyenziswa kakubi kukaJeanette Maples ukuqala ngo-2006 kwaye enye yafunyanwa ngeveki ngaphambi kokubulawa ngumama wakhe, u-Angela McAnulty.
U-Anthony Maples nguye yedwa oyindlalifa yefa likaJeanette Maple. Maples wayengazange adibanise nentombi yakhe malunga neminyaka elishumi ngaphambi kokuba abulawe okanye akazange abe khona kwiinkonzo zesikhumbuzo.
Ngaphantsi kwe-Oregon umthetho wezindlalifa zomthetho kuphela ngabazali bomntu ofileyo, iqabane okanye abantwana. Abantakwabo bazingabonwa njengezindlalifa zomthetho.
IWillamette University Admissions
I-SCHMIDT Igama lomxholo kunye neNtsapho yeMbali
IJografi yeReykjavik, iIceland
Izicwangciso zeSifundo soSuku lweSikhumbuzo kunye neengcamango zokugqibela zokuCwangcisa
Indlela Yokunciphisa isihloko sePhando sePhepha
Ukufundisa i-Latitude ne-Longitude
Umehluko phakathi koCation kunye no-Anion
Intombazana ebizwa ngokuba nguClarissa
Umlando wokunyamezela: I-Old Tradition Yenziwe Entsha
Umlinganiselo wezobudlelwane be-US neRashiya
Ukufaka iiModyuli ze-Perl ezivela kwi-CPAN
Ngaphakathi kweZibhedlele eziNinzi kakhulu zeHlabathi
Ziziphi iziganeko zokwenza i-Eagle i-Double?
I-Norfolk State University Admissions
IiNkcubeko kunye neeNtsuku zamaHindu eziNtsholongwane
10 Amazwi NgamaVenzi aseSpeyin
Abaphathi abaziintloko be-Civil Confederate